Waa maxay Makefile sideese uga shaqeeyaa Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Si rabto inaad maamusho ama cusbooneysiiso hawl markii faylasha qaarkood la cusbooneysiiyo, ka faa iideysiga ayaa ku imaan kara waxtar. Faa'iido sameynta ayaa u baahan feyl, makefile, oo qeexaya dhowr howlood oo la fulinayo.
Magacaani wuxuu u muuqan doonaa mid badan oo idinka mid ah sidaad u isticmaali jirteen inaad ku soo ururisaan barnaamij ka soo baxa koodhka isha. Inta badan mashaariicda laga helo ilaha furan waxay u adeegsadaan sameynta isku-dhafka kama dambaysta ah ee la fulin karo, oo lagu rakibi karo iyadoo la adeegsanayo rakib.
Waqtigan aan fahano sida faylasha noocan ahi uga shaqeeyaan gudaha Linux.
Faylka faylka Waxaa asal ahaan loo kala soocay afar nooc oo bayaanno aasaasi ah:
Xeerar si maldahan u socda.
Xeerarka Cad ayaa sheegaya in la sameeyo feylasha ay ku tiirsan yihiin faylasha kale, iyo sidoo kale amarrada loo baahan yahay in la ururiyo feyl gaar ah.
Inkasta oo kuwa aan tooska ahayn ay la mid yihiin kuwa cad, laakiin faraqa u dhexeeya waxay tilmaamayaan amarrada la fulinayo, laakiin waxay adeegsadaan kordhinta faylka si loo go'aamiyo amarrada la fulinayo.
Tusaalahan ma isticmaali doonno labadan dambe, Waxaan kaliya bilaabaynaa inaan ku daabacno terminal-ka caadiga ah "Hello World".
Tan awgeed waxaan u abuureynaa tusaha madhan ee magaca aad rabto.
Xaaladdan oo kale aan ugu yeerno "tusaale-samee" iyo tan gudaheeda Waxaan abuureynaa cinwaan ka kooban waxyaabaha soo socda:
Hadda ordi faylka adoo garaacaya sameynta gudaha galka, wax soo saarku wuxuu noqon doonaa:
Sida aad u arki karto goorta faylka la fuliyay, amarka ayaa soo celinaya "Hello World" ayaa la soo bandhigayaa, oo ay ku xigtaa soo saarista amarka dhabta ah. Inta badan ma dooneyno taas. Si loo xakameeyo wax soo saarkan markaad ordeyso sameyso, kaliya kudar "@" echo kahor:
Tusaalaha wax ku oolka ah ee tani waa:
Hadda waan sii wadi karnaa inaan mar kale socodsiino faylka. Soosaarka kani waa inuu muujiyaa:
Tani waa quruxsan aasaasiga ah. Laakiin sidaad ogtahay, waxyaalaha macmalka ah waxay ka kooban yihiin waxyaabo badan, kuwaas oo ay ku muujinayaan taxanaha la raacayo.
Waxaan ku dari karnaa taxane fudud faylkan.
Waa maxay waxaan samayn doonaa waa edit file sida soo socota:
Markaad dib ugu soo celiso summada, tani waxay fulin doontaa oo keliya ujeeddada koowaad. Taasi waa sababta oo ah kaliya bartilmaameedka ugu horreeya ee sameynta faylka ayaa ah bartilmaameedka asalka ah.
Si loo fuliyo si isku xigxigta waa lagama maarmaan in lagu muujiyo galka ku jira "dhan". Waa mas'uuliyadda "halkaas" inay soo wacdo bartilmaameedyo kale.
Waad sii wadi kartaa inaad mar labaad sameyso waxaadna arki doontaa taas gudaha galka feyl la yiraahdo "Faylka.txt".
Si la mid ah waa suurtagal in lagu fuliyo bartilmaameed gudaha feyl-ka faylka, tan guud ahaan aad ayaa loo isticmaalaa.
Waxaan wax ka bedeleynaa feylkeena waxaanan ku dari doonnaa waxyaabaha soo socda dhamaadka:
Waad dib u sameyn kartaa sameynta waxayna dib uheli doontaa feylka txt. Sida aad arki doonto, waxay sameyn doontaa wax la mid ah sidii wakhtigii hore. Laakiin hadda waxaan dooneynaa inaan fulino bartilmaameedka ku jira faylka faylka faylka.
Waxaan tan ku sameynaa:
Tan waxaan ku baran karnaa wax aasaasi ah oo ku saabsan sameynta feylasha iyo sida ay u noqon karaan kuwo waxtar leh haddii aan dooneyno inaan wax ka qaboojino waxyaabaha qaarkood.
Sida iska cad waxaad dhisi kartaa feyl ka weyn oo ka sii adag, laakiin tani waa tusaale kaliya oo loogu talagalay dadka cusub (aniga ayaa ku jira) oo baranaya sida ay tani u shaqeyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Waa maxay Makefile sideese uga shaqeeyaa Linux?
Maqaal aad u xiiso badan. Su'aal ... waxa aad ugu yeerto "doorsoomayaal" ma noqon doonaan waxqabadyo ama qaabab?
Xaqiiqdii, haa saaxiib, waad ku mahadsan tahay sixitaanka.
Aad u fiican, waxaan rajeynayaa inaad sii wado qodista.
Waa hagaag, mid uun ama wax kale, https://www.gnu.org/software/make/manual/make.html, waa "bartilmaameedyo"
Ku soo jawaab ManuelALcocer
Waxaan rajeyneynaa inay sii wadaan sharraxaadda waxyaabaha sidan oo kale ah, "meel kasta oo laga joogo iyo aasaasiga", ee hawl maalmeedka socda ee Linux, oo aan cidina weligood u sharraxin si la mid ah xamaasadda sida "faa'iidooyinka iyo hawlgalka" loo wacdiyo.
OpenSUSE Tumbleweed hadda waxay isticmaashaa Linux Kernel 4.18, waxay ku dareysaa taageerada AV1